Global Voices Manome Voninahitra Ny Fiainan’i Bassel Khartabil, ilay Mpikatroky ny Habaka Misokatra, Maty Novonoin’ny Fitondrana Siriana · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Manome Voninahitra Ny Fiainan'i Bassel Khartabil, ilay Mpikatroky ny Habaka Misokatra, Maty Novonoin'ny Fitondrana Siriana
Voadika ny 02 Aogositra 2017 3:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Español, Ελληνικά, فارسی, Aymara, Italiano, русский, Deutsch, Français, বাংলা, македонски, čeština , English
Bassel Khartabil. Sary an'i Joi Ito tao amin'ny Wikimedia (CC BY 2.0)
Tena vonton'alahelo tokoa izahay nandre ny fahafatesan'ny namanay, Bassel Khartabil. Misaona ny fahalasànany izahay ary mandefa ny fiarahana miory amin'ny fianakaviany, ny namany ary ireo rehetra nahafantatra sy nitia azy.
Mpitarika ny Creative Commons tao Siria izy, izay navitrika tao anatin'ny tetikasa maro toy ny Mozilla Firefox sy ny Wikipedia, ivo sy andrin'ny fanitarana ny fahafahana miditra aterineto no sady nanokatra fahalalàna ho an'ny daholobe tao Siria i Bassel Khartabil (aka Bassel Safadi). Namana akaiky izy ho an'ny maro ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, nandray anjara tamin'ny fihaonambe 2009 natokanay ho an'ny Lohataona Arabo.
Ny Novambra 2015, notaterin'ny vadin'i Bassel fa nanatona azy ny olona izay nilaza ny tenan'izy ireo ho mpikambana ao anatin'ny governematan'i Assad. Nolazain'izy ireo tamin'i Noura Ghazi fa voaheloka ho faty ny vadiny, saingy tsy nisy fanampim-panazavana nomeny. Tsy nisy fantatra ny toerana nisy an'i Bassel sy ny fomba niainany tany hatramin'ny anio, fotoana nahafantaran'i Noura avy amin'ireo Siriana manampahefana fa hoe efa tamin'ny 2015 izy no novonoina.
Androany sy rahatrizay dia homenay voninahitra ny asan'i Bassel tamin'ny naha-mpitarika ny hetsika tranonkala misokatra azy. Ary omenay voninahitra ireo ezaka nandritry ny dimy taona lasa nataon'ny olona sy fikambanana marobe nisolo vava ho famotsorana azy.
Hatramin'ny nanombohan'ireo hetsipanoherana ny fitondran'i Bashar al-Assad tamin'ny 2011, maherin'ny 65.000 ireo olona nanjavona, araka ny voalazan'ny tambajotra Siriana ho an'ny Zon'Olombelona.
Tsy hita isa ireo izay nosamborina na niharan'ny fanjavonana an-terisetra nataon'ny fitondrana no niatrika fampijaliana, ary hatramin'ny famonoana mihitsy. Tamin'ny 2016, raha kely indrindra 17.723 no maty tany am-pitazonana azy hatramin'ny 2011, araka ny voalazan'ny Amnesty International, fikambanana iraisampirenena miaro ny zon'olombelona.Tantaran'olona marobe no mbola tsy fantatra.
Ireto ny vakiteny momba ny asa sy fiainan'i Bassel:
Artists and Writers Celebrate the Work of Missing Syrian Developer Bassel Safadi, (Ang.) Jona 2017
#FreeBassel: Missing for More Than a Year, Syrian Web Developer is Not Forgotten, (Ang.) Oktobra 2016
Taratasim-pitiavana Ho An'i Bassel Khartabil, Ilay Siriana-Palestiniana Voafonja Febroary 2015
#FreeBassel: Behind the Screens of the Syrian Resistance, (Ang.) Martsa 2014
#FreeBassel: Herintaona Aty Aoriana, Mbola Any Am-ponja Ity Mpiserasera Siriana Ity, Martsa 2013
Fanentanana #FastforBassel Hiarovana Mpiserasera Siriana Hiatrika Fitsarana Miaranila, December 2012
Avotsory Bassel: Mpampiasa Aterineto Tandindonin-doza, Desambra 2012